Jiolahy Taloha: “Ny Nataoko Ihany no Saika Nahafaty Ahy!”
HAMAKY AMIN'NY TENY Abua Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Baoulé Bashkir Bassa (Cameroun) Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Ga Galoà Grika Groenlandey Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kabuverdianu Kamba Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Belize Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mingrelian Mongol Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Setswana Shona Sidama Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Valencienne Vietnamianina Waray-Waray Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Édo Éwé
Notantarain’i ÓSCAR SERPAS
Nisy niteny tamiko, indray mandeha izay hoe: “Ialahy kosa aloha raha tena te hahafantatra an’Andriamanitra a, dia aza miala amin’ny Vavolombelon’i Jehovah mihitsy!” Mbola vao nanomboka nianatra Baiboly tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah aho tamin’izay, dia gaga aho naheno ny tenin’ilay olona. Fa maninona? Aleo àry hotantaraiko ny fiainako.
Teraka tany Quezaltepeque, eto Salvadaoro aho. Dimy ambin’ny folo mianadahy izahay, dia izaho no fahenina. Niezaka nampianatra ahy foana ry dadanay sy mamanay hoe mila manao ny marina aho sady mila mankatò lalàna. Nisy Vavolombelon’i Jehovah tonga koa tao aminay indraindray, dia nampianatra Baiboly anay. Anisan’izany i Leonardo. Tsy niraharaha an’izay nianarako anefa aho, fa nataoko daholo izao ditra rehetra izao. Lasa nisotro toaka sy nifoka rongony niaraka tamin’ny mpiara-mianatra tamiko aho, nanomboka tamin’izaho 14 taona. Niala tsikelikely tamin’ny fianarana ry zareo, dia lasa jiolahy. Voatarika hiaraka tamin-dry zareo koa aho, tatỳ aoriana. Nirenireny teny an’arabe izahay tontolo andro. Nangataka sy nangalatra no nataonay raharaha, sitrany ahay mba mahazo vola hanaovana ditra.
Lasa hoatran’ny hoe fianakaviako mihitsy ilay andian-jiolahy niarahako, dia nampiako foana. Nisy namako mamon-drongony, ohatra, indray mandeha, dia nila ady tamin’olona teny akaikinay. Resin’ilay olona anefa izy, dia notazoniny teo sady niantsoany polisy. Tezitra be aho, dia novakiko tsirairay ny fitaratry ny fiaran’ilay olona, amin’izay mba avelany mandeha ilay namako. Niangavy ahy tsy hanimba ny fiarany ilay olona, nefa vao mainka tsy nasiako niangana ilay izy fa nopotehiko!
Nifampitana tamin’ny polisy izaho sy ny namako, tamin’izaho 18 taona. Nisy baomba vita tanana tetỳ amiko, dia saika hatsipiko teny amin’ireo polisy ilay izy, kanjo nipoaka. Tena tsy haiko hoe inona no nampipoaka azy tetỳ an-tanako. Ny tanako efa potipotika be no tazako farany, dia torana aho avy eo. Tany amin’ny hopitaly aho vao nahatsiaro tena. Bory ny tanako ankavanana, dia lasa narenina ny sofiko ankavanana. Lasa tsy nahita tsara koa ny masoko ankavanana.
Mbola tsy fay ihany aho fa vao nivoaka ny hopitaly, dia niaraka tamin’ilay andian-jiolahy indray. Voasambotra anefa aho taoriana kelin’izay, dia nigadra. Nigadra koa ny namako. Vao mainka izahay tsy nifankafoy tany fa nifampitaritarika foana. Vao maraina, ohatra, izahay, dia niara-nifoka rongony sady niara-nisakafo. Tsy nisaraka mihitsy izahay raha tsy efa hatory.
Namangy ahy tany am-pigadrana i Leonardo, indray andro. Nisy tatoazy teo amin’ny sandriko ankavanana, ary teboka telo ilay izy. Nanontaniany aho hoe: “Inona izao no dikan’ireo teboka telo ireo?” Dia namaly aho hoe: “Misy dikany ireo ka! Manao firaisana, dia mifoka rongony, dia mihaino rock.” Hoy anefa i Leonardo: “Sao dia tsy izany fa hoe miditra hopitaly, dia migadra, dia maty? Efa niditra hopitaly ianao, dia izao ianao migadra. Dia inona izany avy eo?”
Gina tsy nahateny aho naheno an’izany. Tonga saina aho hoe marina ny teniny. Ho faty ny hiafarako raha mbola tohizako ny ditrako. Nanasa ahy hianatra Baiboly i Leonardo, dia nanaiky aho. Tapa-kevitra ny hiova aho, rehefa nianatra Baiboly. Nianarako tao, ohatra, hoe: “Ny naman-dratsy dia manimba ny fahazarana mahasoa.” (1 Korintianina 15:33) Tsy maintsy niova namana àry aho. Izay no nila nataoko voalohany. Tsy nivorivory niaraka tamin’ireo jiolahy namako intsony aho, fa niara-nivory tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Nanao fivoriana tao am-ponja mantsy ry zareo. Nihaona tamin’ny gadra iray atao hoe Andrés aho tao amin’ilay fivoriana. Tao am-ponja izy no natao batisa, dia lasa Vavolombelon’i Jehovah. Nasainy hiara-misakafo taminy aho rehefa maraina. Lasa tsy nifoka rongony intsony àry aho isa-maraina, fa niara-nandinika andinin-teny iray tamin’i Andrés.
Tonga dia tsikaritr’ireo jiolahy namako hoe niova aho. Nampiantso ahy àry ny lehiben’ilay andian-jiolahy. Natahotra be mihitsy aho, satria tsy haiko izay hataony amiko raha fantany hoe tsy te hiaraka amin-dry zareo intsony aho. Sarotra mantsy izany miala ao anatina andian-jiolahy izany, satria mety hovonoin-dry zareo ianao. Hoy ilay lehibenay tamiko: “Ary ialahy tato ho ato hoatran’ny tsy miarakaraka aminay intsony, fa lasa any amin’ny Vavolombelon’i Jehovah a! Fa ahoana?” Nohazavaiko taminy hoe tiako ilay zavatra nianarako, dia tiako hotohizina sady te hiova aho. Gaga aho fa nanaiky izy. Mahazo miala, hono, aho fa mila hitan-dry zareo fotsiny hoe tena te ho lasa Vavolombelon’i Jehovah. Niteny koa izy hoe: “Ialahy kosa aloha raha tena te hahafantatra an’Andriamanitra a, dia aza miala amin’ny Vavolombelon’i Jehovah mihitsy! Dia manantena izahay hoe tena hiova ialahy. Arahabaina leisy a! Tsara io fa tohizo. Mahavita manampy an’ialahy ny Vavolombelon’i Jehovah. Izaho tsinona efa nampianarin-dry zareo tany Etazonia. Misy fianakavianay koa Vavolombelon’i Jehovah. Aza matahotra fa tohizo.” Mbola natahotra ihany aho, nefa faly be koa! Nivavaka mangina aho, dia nisaotra an’i Jehovah Andriamanitra. Hoatran’ny hoe vorona voahidy tao anaty tranom-borona aho, nefa nafahana avy eo. Tamin’izay vao azoko ilay tenin’i Jesosy hoe: “Ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hanafaka anareo.”—Jaona 8:32.
Mbola nomen’ny namako rongony ihany anefa aho taorian’izay. Tsoriko aloha fa tsy nahatohitra an-dry zareo aho indraindray e! Nitalaho tamin’i Jehovah im-be dia be anefa aho mba hanampy ahy, dia nahavita tsy nifoka intsony rehefa nandeha ny fotoana.—Salamo 51:10, 11.
Rehefa afaka tany am-ponja aho, dia be dia be no nieritreritra hoe hanao ny fanaoko taloha indray aho. Efa nialako tanteraka anefa ilay izy. Niverina matetika tany amin’ilay fonja kosa aho mba hitory an’izay nianarako tao amin’ny Baiboly. Tamin’izay ny namako vao tena resy lahatra hoe niova aho. Ny jiolahy fahavalonay kosa nieritreritra hoe mbola hoatran’ny taloha ihany aho.
Nifanehatra tamin-dry zareo, ohatra, aho, indray mandeha. Nandeha nitory ny vaovao tsara niaraka tamin’ny mpiara-mivavaka aminay anankiray aho tamin’izay. Tonga dia nitangorona teo aminay ilay andian-jiolahy. Nitondra fitaovam-piadiana ry zareo, dia efa handeha hamono ahy ho faty. Niezaka nanazava moramora tamin-dry zareo ilay mpiara-mivavaka aminay hoe efa tsy jiolahy intsony aho. Izaho koa niezaka ny ho tony. Mbola novonovonoin-dry zareo ihany anefa aho sady noteneniny hoe tsy mahazo mandalondalo eny amin’ilay tanàna intsony. Rehefa avy nanala ny fony teo ry zareo, dia navelany handeha ihany izahay. Raha taloha aho no nisy namono hoatran’iny, dia efa namaly faty hoatr’izay. Tena nanova ahy anefa ny Baiboly. Miezaka manaraka ny 1 Tesalonianina 5:15 aho, hoe: “Tandremo sao misy mamaly ratsy ny ratsy, fa aoka kosa hifanao soa hatrany sy hanao soa amin’ny olona rehetra.”
Niezaka ny hanao ny marina foana aho, rehefa lasa Vavolombelon’i Jehovah. Tsy mora izany nefa vitako ihany satria ampian’i Jehovah aho sady miezaka mankatò an’izay lazain’ny Baiboly. Nahazo namana vaovao koa aho, dia manampy ahy ry zareo. Tsy te hiverin-dalana intsony aho.—2 Petera 2:22.
Nahery setra be aho taloha. Valifaty foana koa no masaka tao an-dohako. Efa maty aho hoatr’izay raha notohizako izany. Niova anefa aho rehefa nianatra Baiboly. Nialako daholo ny zava-dratsy fanaoko. Ataoko koa izay hihavanana amin’ireo jiolahy niady tamiko. (Lioka 6:27) Namana tsara koa izao no mifanerasera amiko, dia manampy ahy ho tsara toetra izany. (Ohabolana 13:20) Sambatra aho satria navelan’Andriamanitra daholo ny zava-dratsy vitako. (Isaia 1:18) Manompo azy aho, dia izao vao misy dikany ny fiainako.
Nisy fampiofanana manokana natrehiko tamin’ny 2006. Natao ho an’ny mpitovo mitory ny filazantsara izy io. Nanambady aho, taona vitsivitsy taorian’izay, dia niteraka vavikely iray izahay. Mampianatra Baiboly izao no tena ataoko. Resahiko amin’ny olona izay toro lalan’ny Baiboly nahasoa ahy. Mpiandraikitra eo anivon’ny fiangonan’ny Vavolombelon’i Jehovah koa aho, dia miezaka manampy ny tanora mba tsy ho solafaka hoatr’ahy. Ny nataoko ihany no saika nahafaty ahy! Tsy manao an’ireny zava-dratsy fanaoko ireny intsony anefa aho izao satria te ho velona mandrakizay. Izany no ampanantenain’Andriamanitra ao amin’ny Baiboly.
Hizara Hizara “Ny Nataoko Ihany no Saika Nahafaty Ahy!”
ijwcl no. 6